Ny sandan'ny anjara Alphabet Inc.
Anisan'ireo Alphabet Inc. androany, ny vidin'ny GOOG tahiry amin'ny aterineto izao, mizara ny vidin'ny Alphabet Inc..
Alphabet Inc. Stock ny vidiny Diary an-tserasera Ny tantaram-piainana Capitalization Tombony Vola Naoty
GOOG = 2 582.42 US dolara
-2.38 USD (-0.0922%)
Ny vidin'ny taham-bolan'ny Alphabet Inc. ao amin'ny US dolara dia sanda mijanona ao amin'ny loharanom-baovao rehetra. Ny fampahalalana momba ny fiovan'ny Alphabet Inc. ao amin'ny US dolara dia havaozina indray mandeha isan'andro. Io dia fijerena ny vidin'ny stock stock stock. 1 stock of Alphabet Inc. dia 2 582.42 stock of US dolara. Ho an'ny tahiry 1 avy amin'ny Alphabet Inc. izao dia mila mandoa 2 582.42 stock of US dolara. Nihena ny tahan'ny Alphabet Inc. nanohitra ny US dolara nataon'i -9 zato heny tamin'ny isa iray isan-jato.
Alphabet Inc. ny lanjan'ny orinasan'ny orinasa US dolara
Iray volana lasa izay, ny vidin'ny Alphabet Inc. dia azo vidiana ho an'ny 2 930.09 US dolara. Telo volana lasa izay, ny Alphabet Inc. dia azo atakalo ho an'ny 2 965.41 US dolara. Enim-bolana lasa izay, ny vidin'ny Alphabet Inc. dia azo vidiana ho an'ny 2 704.42 US dolara. Tsipika ny vidin'ny tahiry dia eo amin'ny pejy. -0.75% - fiovana amin'ny tahiry vidin'ny Alphabet Inc. ao amin'ny US dolara isan-kerinandro. 33.98% - fiovana amin'ny tahiry vidin'ny Alphabet Inc. ao amin'ny US dolara isan-taona.
Stock quotes Alphabet Inc. US dolara
GOOG Ny US dolara (USD)
1 GOOG 2 582.42 US dolara
5 GOOG 12 912.10 US dolara
10 GOOG 25 824.20 US dolara
25 GOOG 64 560.50 US dolara
50 GOOG 129 121 US dolara
100 GOOG 258 242 US dolara
250 GOOG 645 605 US dolara
500 GOOG 1 291 210 US dolara
Androany, ny 10 stock of Alphabet Inc. azo vidiana ho an'ny 25 824.20 US dolara. Ankehitriny, 64 560.50 US dolara azo amidy amina 25 stock of Alphabet Inc.. Androany, ny 50 stock of Alphabet Inc. azo amidy ho an'ny 129 121 US dolara. Azonao atao ny mivarotra ny 258 242 US dolara ho an'ny 100 stock of Alphabet Inc.. Androany 645 605 USD = 250 stock of GOOG. Ankehitriny, 1 291 210 US dolara azo vidiana ho an'ny 500 stock of Alphabet Inc..
GOOG tantara momba ny vidin'ny stock
27/01/2022 2 582.420 USD -2.38 ↓
Androany ao amin'ny 27 Janoary 2022, 1 stock amin'ny Alphabet Inc. vidiny 2 582.420 US dolara. 26 Janoary 2022, 1 stock amin'ny Alphabet Inc. vidiny 2 584.800 US dolara. 25 Janoary 2022, 1 stock amin'ny Alphabet Inc. vidiny 2 534.710 US dolara. Ny ambony indrindra Alphabet Inc. ao amin'ny US dolara vidiny ao amin'ny dia tao amin'ny 24/01/2022. Alphabet Inc. in US dolara amin'ny 21 Janoary 2022 dia mitovy amin'ny 2 601.840 US dolara.
Anisan'ny Alphabet Inc. ny iray amin'izao fotoana izao amin'ny 2 582.42 $. Ny vidin'ny GOOG dia niova ho -0.0922% na -2.38 USD hatramin'ny andro iraisam-barotra farany. Azonao atao ny mividy entana 100 Alphabet Inc. amin'ny 258 242 US dolara na mivarotra 50 isa amin'ny GOOG amin'ny 129 121 US dolara.
Alphabet Inc dia mpamatsy ny vokatra sy tranonkala Internet. Ny marika misy azy dia ahitana ny Search, Android, YouTube, Apps, Maps & Ads.
Anisan'ireo Alphabet Inc. amin'izao fotoana izao, ny vidin'ny stock GOOG dia an-tserasera amin'izao fotoana izao.
Vidin'ny GOOG -tserasera
Ny tahirim-bola Alphabet Inc. dia mitantara ny vidin'ny stock GOOG amin'ny aterineto, GOOG.
Alphabet Inc. Ny US dolara karama hatramin'ny fanombohan'ny varotra.
Ny habetsahan'ny varotra an'ny GOOG dia mizara androany ary ny tantaran'ny tombom-barotry ny Alphabet Inc..
Teti-bola Alphabet Inc.
Alphabet Inc. vola isaky ny anjara
Ny vola miditra isan-kerinandro amin'ny orinasa Alphabet Inc., dia mitatitra momba ny tombom-barotry ny GOOG ho an'ny taona 2022.
Fivarotana Alphabet Inc.
Tatitra momba ny vokatry ny orinasa Alphabet Inc., Alphabet Inc. isan-taona ho an'ny 2022.
Fanamarihan'ny orinasa Alphabet Inc.
Alphabet Inc. ao amin'ny sokajin'izao tontolo izao